Fanesorana ny mponina eny Ambanin’Ampamarinana: hiditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana raha misy fanoherana | NewsMada
Soupçons de corruption: Le dossier Leva bientôt passé au crible ...février 20, 2020
Hanao hetsika maika ny fanjakana… : Distrika 6 voakasika ny haintany, tsy fahampian-tsakafo … any ...février 20, 2020
Fanesorana ny mponina eny Ambanin’Ampamarinana: hiditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana raha misy fanoherana
Par Taratra sur 06/02/2019
Araka ny fampahafantarana nataon’ny fokontany Ambanin’Ampamarinana, niainga amin’ny baiko nomena azy ireo, rahampitso alakamisy ny fe-potoana farany tsy maintsy hialan’ny mponina voakasiky ny mety mbola hihotsahan’ny vato. Aorian’izay, hisy ny didy fandrodanana ireo trano, ary mety hiditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana raha misy fanoherana izany.
“Tsy maintsy hialana ny trano fonenana rehetra. Tsy misy ankanavaka. Farafahelany ny alakamisy 7 febroary. Ao aorian’io daty io, dia ny fanjakana no hamoaka didy fandravana, ka hanatanteraka izany miaraka amin’ny hery (manu-military)”, io ny filazana mivandravandra naparitaka eny amin’ny fokotanin’Ambaninan’Ampamarinana, nanomboka omaly. Mazava ny fanambarana fa hiroso amin’ny fampiasana hery, ny mpitandro filaminana ny tompon’andraikitra raha misy ny fanoherana tsy mety hiala eny an-toerana.
Efa voalaza hatrany fa mbola tadindomin-doza ireo olona monina eny an-toerana, satria efa voatsiriky ny BNGRC fa misy maro ny vato mitritra ary ahina hianjera tampoka amin’ny fotoana rehetra. Araka ny fepetra noraisain’ny fitondrana avy amin’ny alalan’ny prefektiora, tsy azo onena intsony mihitsy hatrany amin’ny 70 metatra miala ny lalana. Manomboka eny Ambatomirakotra ka hatreny Ambatomborodamba.
Mimenomenona ny olona sasany
Mazava ho azy, misy hatrany ny mimenomenona amin’ny fanesorana azy eny amin’ny toeram-ponenany. Mety noho izy ireo tsy mahafantatra mazava izay mety halehany na hiafarany ny mahatonga izany. Mila fanazavana sy fanomezan-toky izy ireo. Nimenomenona ohatra ny raim-pianakaviana iray fa tsy misy miambina akory eny an-toerana amin’ny alina. “Mandalo fotsiny ireo mpitandro filaminana ary tsy miverina intsony”, hoy izy.
Ireo fianakavina manana havana maty ihany koa milaza fa akaiky loatra ny fanalana azy ireo, noho izy ireo milaza fa sahirana amin’ny fandevenana sns.
Tao kosa anefa ireo nanaiky niala moramora ary efa nampian’ny zandary tamin’ny fanalana ny entany sns, efa hatry ny afakomaly. Mbola raharaha ny fandresen-dahatra ireo olona sasany iala eny an-toerana, na efa hita izao aza ny voka-dratsin’ny loza aterany. Mety hiafara amin’ny fampiasan-kery ihany izy ity?
Soupçons de corruption: Le dossier Leva bientôt passé au crible 20/02/2020
Hanao hetsika maika ny fanjakana… : Distrika 6 voakasika ny haintany, tsy fahampian-tsakafo … any atsimo 20/02/2020
Talen’ny DGI – Fanambaran-ketra: “Ao ny tarehimarika hadino, niniana nahena, ny hosoka…” 20/02/2020
Maroantsetra: nentanina ho matihanina ireo mpanao asa tanana 20/02/2020
BFM- BIC: tafatsangana ny Birao mirakitra ny antontam-baovao (BIC) 20/02/2020